Tena tafakatra 100 000 fa tsy angano - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Boky ho an’ny ankizy
Tena tafakatra 100 000 fa tsy angano
Isan’ny olana eo amin’ny fampitana fahalalana ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Maro no antony miteraka an’izany. Fanomezana boky no vahaolana iray.
Raha miresaka amin’ireo ray aman-dreny efa nahazo taona na ireo zokinjokiny dia tantaraina foana fa rehefa nahazo loka tany ampianarana fahiny dia boky no nomena izay nahay sy tsara laharana tao an-dakilasy ho an’ny mpianatra kilasy efa mahay mamaky teny. Mbola tahaka izany ihany taty aoriana ho an’ny kilasy garabola ka ireny bokin-jaza ireny kosa no nozaraina.
Nihalefy izany fahazarana izany taty aoriana. Nahoana ? Ny fitiavana mamaky teny ve ? Sa, ny fahalafosan’ny boky ? Sa… Mety ho maro ny antony. Ireo mpanadihady ny mikasika ity lafiny vaky boky ity dia milaza fa isan’ny antony raha ny tanora ankehitriny amin’ny taona 2000 no mankaty dia noho ny vokatry ny teknolojia ka ny resaka antelefaonina sy ny “sms” no mahazo laka.
Inona no vahaolana ? Matetika fandre ny hoe “omeo boky ny zaza” na koa “zaro hamaky teny ny ankizy”. Fa mijanona ho famporisihana izany matetika. Manoloana izany indrindra no nahatonga ny fikambanana Madagasikarako Namako hirotsaka antsehatra ka nifototra amin’ny famporisihana vaky teny sy fanohanana ny tontolon’ny boky no nimasoany.
“Efa nihoatra ny 100 000 isa ny boky novokarin’ny fikambanana nanomboka ny taona 2007 nanombohana ny asa” hoy Basilisse Pflüger-Rakotomalala, filoha lefitry ny fikambanana. Boky angano ho an’ny ankizy no atontan’ny Edisiona Boky Namako. Tany ampanombohana dia ireo angano malagasy no navoaka boky kely sady mora vakiana. Isan’ny boky efa navoaka ny Ratakabola sy renimborondolo, angano antakarana na koa Izy telo mirahavavy nanambady fosa, angano betsimisaraka ary Imaintsoanala izay fantatry ny rehetra.
Nanomboka ny taona 2017 kosa dia novelarina ny sehatra. Ireo angano malaza any ivelany indray no nadika amin’ny teny malagasy. Ohatra, Ikalasatromena (Le petit chaperon rouge) na koa Ireo mpitsoka mozikan'i Brema (Les Musiciens de Brême) an’i Frères Grimm, Ilay saka be baoty (Le chat botté) de Charles Perrault, Ilay gana kely ratsy tarehy (Le vilain petit canard) et Ny akanjo vaoavaon'ny amperora (Les nouveaux habits de l’Empereur) de H-C. Andersen. Efa misy hafa ho avy.
Be am-bava ilay tarehimarika 100 000 satria mbola vao boky 6 isaky ny fokontany ’17 845 ny fokontany) manerana an’i Madagasikara anie izany raha zaraina e. Mila hamafisina ny asa. Ho fanohizana ny ezaka dia hisy ny varavarana misokatra hahitana ireo boky ireo sy an’ireo edisona hafa miara-miasa amin’ny fikambanana. Ho tontosaina ao amin’ny Librairie Saint Paul ao Analakely. Maro ireo edisona hampiranty ny vokatr’izy ireo mandritra izany fotoana izany ka isan’izany ny edisona andry Masera mpampiantrano, ny Edisiona Ambozontany ary ny TPFLM. Ho tontosaina ny 2 sy 3 aogositra izao io varotra fampirantiana io.
Vernissage « DOUBLE WORLD » : Lari expose hors galerie - il y a 8 jours
30e édition de Madajazzcar : Airtel Madagascar en symbiose avec les amoureux du jazz - il y a 11 jours